सावधान ! मोबाईल चलाउने जो कोहीले यो कुरा थाहा पाउँदा झस्किनेछन् ||::आर एम खबर
सावधान ! मोबाईल चलाउने जो कोहीले यो कुरा थाहा पाउँदा झस्किनेछन् ||
काठमाडौं । आजको संसारमा,सबैले स्माट फोनहरू प्रयोग गर्दछन तर यसको अधिक धेरैं प्रयोगको कारणले गर्दा धेरै हानिहरू हुने गर्छ । चीनमा एउटा यस्तैं घटना बाहिर आएको जहाँ लामो समयसम्म मोबाइल चलाउनु अभिषाप भएको छ। एक समाचार वेबसाइट सङ्ग्टिस्टका अनुसार झाँझुनवालाका शुनंगामा एक महिला थिइन जसले लगातार सात दिनसम्म लगातार मोबाइल चलाईन । मोबाइल चलाईन यो विषय होईन तर अहिले ति युवतीका औंलाहरु सिधा हुँदैनन समस्या यो हो । यदि तपाई पनि लामो समय लगातार स्र्माट फोन चलाउनुहुन्छ भने आजैं ख्याल गर्नुहोस कत्तैं तपाईलाई पनि यस्तो खालको असर देखा पर्न सक्छ ।
लगातार, आफ्नो मोबाइल चलाउँदा उनका औंलाहरू अब सिधा छैनन। यो समाचार सुन्दा केही अचम्मलाग्दो छ , तर यदि तपाईं लगातार घण्टौ घण्टाको लागि मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने, यो तपाईंको लागि एक चेतावनी हो। प्रतिवेदन अनुसार, महिला एक हप्ता छुट्टीमा थिइन तर उनी वरपर हिंड्नुको सट्टा, लगातार आफ्ना मित्रहरु संग च्याट गर्न प्रयोग गर्थिन । एक हप्ताको विदालाई उनले घुमघाममा भन्दा पनि मोबाइलमा बिताएको कारण उनले अहिले यस्तो दर्दनाक अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ ।
उनले सुतिरहेको बेलाबाहेक अन्य समय मोबाइलमा बिताउने गर्थिन । यत्तिसम्म भनिएको छ कि उनी ओछ्यानमा सुतेर धेरैं मोबाइल चलाउने गर्थिन । यो प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि फोनको लागतारको प्रयोगका कारण उनलाई अहिले अनौंठो खालको सास्ती देखिएको छ । एक दिन जब उनलाई हातमा दुखाइ शुरू भएको अनुभव भयो अनी उनले थाहा पाईन उनका औंलाहरु त सिधा नैं छैनन । यस पछि, उनी अस्पताल गइन र चेकअप गरिसकेपछि डाक्टरहरूले केही औषधी दिए अनी उनको हातलाई ठीक गरे। उपचार पछि महिलाको हात अहिले ठीक छ। एजेन्सी